Amanamaa wayyanee fii waahila Mallasaa kan ture Dr. Nagaasoo Gidaadaa hidhame jedhu.. -
Amanamaa wayyanee fii waahila Mallasaa kan ture Dr. Nagaasoo Gidaadaa hidhame jedhu..
bilisummaa September 26, 2013	9 Comments
Previous Murna abbaa garaa Lichoo Bukraa jaaree!
Next The Brain of the Bale Rebellion, Sheik Musa Bati, Died at the Age of 70
Dhaamsa Dr. Nagaasoo Mana Hidhaa Keessaa:
Mana hidhaa keessatti maanguddoon Oromoo kan Dr. Nagaasoo waliin hidhan gaaffii tokko gaafatan. Gaafichis, “bara 1991-92 keessa yeroo Obbo Leencoon bara qaban abbaa Dr. Nagaasoo ijatu jaame; Dr. Nagaasoo immoo sammuutu jaame” jedhee sirratti odeessisaa ture. Amma seera Wayyaanee fudhatee galuufi jedhamaa dhaamsa maal qabda”? Jedhaniitu gaafatan. Dr. Nagaasoonis, “Dhuguma jedhe Obbo Leencoon. Garuu, garuu abbaan of hin argu malee Obbo Leencoo immoo sammunis ijjis wajjuma jaamani. Kana irraa kan ka’e har’dha illee Wayyaaneen waan taate sammuun isaas ijji isaas hubatanii arguu hin dandeenye” jedhee deebiseef. Yaa rabbi keenya, ballaan inni tokko isa tokkotti dhufeetu ‘Namoitni kan koo raajuu, kan kee immoo qarabaa dhumaan si keessaa baasanii” jedhee gaafate jedhama. Nuti jidduutti rakkanne!
Isan ni jaamanii ati immoo ni dude. Ni hidhamen kijiiba.
Kunooti booddeen namota saba isaanii gananii kana taha.Nagaasso seenaa Gobanaa Daancee eenyuu himaaf.Itti dhimma bahanii summii nyaachisan,hidhanii akka malee rakkisanii ajjeesan.obanaa Daancee hogummaa waraana qaba ture,irraa sodaa waan qabaniif ajjeesan haala sukanneessan.
Nagaaso nama toobatuu miti.Oromummaa irratti cicchee Oromummaan du’a nama filatuu miti,haalli mijjaa’uuf condooma alagaa ta’uu irraa of duuba hin deebi’u.Wayiiii uuuuh yaa kondmoota habashaa booddeen keesan mana hidhaa fi daraaraa dhaa?galata alagaa irraa argantan kunoo akkanaa?akumja Goobana daancee fi juneeddii Saaddoo booddeen keessan dararaadha?wayiii uuuuuuuuuuuuuuuuu yaa kondoomota .
Yoo xiqqaate xiqqaate Dr. Nagaasoon dhiira gara kuteeysa. Akka Leencoo asii fi achi baayye mimmiliquu hin hojjenne. Duras Wayyaanee arrabsee dhaaba isaanii keeysaa bahe. Ammas ejjennoo isaa HAbashoota waliin yaa ta’u malee akka nama tokkootti waan itti amanee irratti cichee jira. Akka Leenoo waggaa 40 summii if keeysatti qabatee dhaaba ABO keeysaan nyaachaa ykn ‘borobboraa’ hin turre. Dhaabileen Oromoo hafanis keeysattu kan biyya teeysatti nagaan sossoona jedhan, kan akka Dr. Mararaafaa kana irraa barmoota daynsa argatanii kutannoo dhan uummata isaanii sossoosuuf murannaan akkasumas warren hidhannon sosso’an waliin quunnamtii tarsiimoo qabaannan ummati Oromoo akka galaanaati! Tokkichaan ishii liqimsa!
obboleessa kiyya namumti diinaaf dalagu booddeen sanuma nagaasoon hundarra hamaa . hoggonnoonni keenya tokkolleen sirrirra hin jiran tokkolleen amma dura bakka faarfaman hin geenye. garuu ammatti namuma diinaan waliin dalaguutu hamaadha. tokkoffaaan Nagaasoo baga hidhame gammachuu guddaa juneeydis ajjeesan jechuu dhagahama sunis gammachuudha abbaa duulaallee haa ajjeesanii gammachuudha . nama wayyaaneef dalagu akkasuma dalaguu yaalu hunda Rabbiin haa xiqqeessuu.
Tokkolleen walirra hin jiru: Dawud Ibsaa=Leencoo=Dagaagaa=Galchuu=Bakakkoo=Abbaa Duulaa=Diimaa Noogoo=herd of sheep
Abbaa Duulaa = Muktar+Juneeddi Saaddoo
when some one claim to be an oromo or oromo political figures are used as tools and then humilated we feel it.They are not humilated because of their personality but because they are oromo. being an oromo and talking about justice,democracy, human rights and liberty by itself criminality in the eye of habeshan elites in power.The habeshans think that it is only them who can speak about democracy which is habeshan democracy, it is only them who can think about justice that is habeshan justice.They think that they are capable of everything and created to lead.By doing that they dont know how Back ward and weak they are.
I’m asking if Bilisummaa website is un Oromo owned website or Aderee trying to work for TPLF
who’s mission is to create refit among Oromo’s . Of all people the Aderees cannot be trusted for Oromo movement. Not hate its the truth. Lets verify the back ground of the owner.
yaa qomowwaan koo kun hunduu anaaf raajiidhaa maaf yoo jettaan taate
Dr Nagaasoo fi kan biroos woyii wolaamoo ykn amaaraa ykn sabaa biroo tahaanii yoon beekuu baadbees
isaan hunduu oromiyaa nyaachuuf gurgurachuuf ilmaan ofii ittiin barsiifachuu yoo tahee malee
Oromoof kan yaade Dr.Maraaraa yoo tahee malee hunduu dantaa mataa ofiitif warraa dhamahuudhaa waan taheef rabbiin nama hiddii koo kush irraa maddee jedhuu qoftii oromoof haa quuqamuu dhiifama jedhaa iddooo doggoree dubbistootaa keenyaa